अब मरेका मान्छेलाई पनि पुनः जिउँदो बनाउन सकिने डाक्टरको दाबी – NepalajaMedia
August 4, 2020 192
के डाक्टरले एक व्यक्तिको टाउँको अर्को व्यक्तिको शरीरमा फिट गर्न सक्छन् ? मेडिकल साइन्समा अन्य अङ्गजस्तै टाउको प्रत्यारोपण पनि सम्भव हुन सक्छ ? बेलायतका एक पूर्व न्यूरोसर्जन तथा रोबोटिक्स विज्ञले यस विषयमा आफ्नो धारण राखेका छन्।
बेलायतका हल यूनिभर्सीटी टिचिङ हस्पिटलका पूर्व क्लिनिकल प्रमुख डा ब्रुस म्याथ्युलेखआउँदो १० वर्षमा टाउको प्रत्यारोपण सम्भव हुने दाबी गरेका छन्। उनले रोबोटिक्स, स्टेम सेल प्रत्यारोपण र शक्तिशाली शल्यक्रिया गर्ने प्रविधिको विकास भएका कारण यो सम्भव हुन सक्ने दाबी गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।
सन् २०१७ मा एक चिनियाँ साइन्टिस्टले एउटा सफल टाउको प्रत्यारोपण गरेको दाबी गरेका थिए। जिआओपिङ रेन नामका एक साइन्टिस्टले एक मृ त व्यक्तिको टाउँको अर्को व्यक्तिको शरीरमा सफल प्रत्यारोपण गरेका थिए।
चीनको हार्बिन मेडिकल यूनिभर्सिटीमा गरिएको उक्त शल्यक्रिया १८ घण्टा चलेको थियो। शल्यक्रियापछि स्पाइन, नब्र्स तथा ब्लड वेसल्सको रिकनेक्ट गरिइएको थियो।
डेली मेलको रिर्पोटका अनुसार डा म्याथ्युका अनुसार प्रत्यारोपका क्रममा यदी ब्रेन र स्पाइनल कार्ड साथमा राख्यो भने असम्भव हुँदैन्। यदी यो सम्भव भयो भने जुन व्यक्तिको हात खुट्टा काटिएको छ वा शरीर पूरै खराब भएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिका लागि फाइदाजनक हुने गर्दछ। साथै म’रिसकेका व्यक्तिलाई पनि जिउँदो बनाउन सकिन्छ।
Prevपर्वतमा नेपालकै अग्लो पुल मात्र होइन, विश्वकै लामो झोलुंगे पुल पनि
Nextमलेशियामा सुरक्षा गार्ड कुट्ने सुपरभाइजरद्वारा आत्मसमर्पण, कुट्ने कुटाइ खाने दुवै नेपाली
दोस्रो चरणको कडा खालको कोरोना परास्त गर्न नेपालमै बन्यो औषधी, ‘ईम्युनो बुस्टर’ ले ५ दिनमै संक्रमित निको हुने दावी (भिडियो हेर्नुस्)
आइतबारदेखि काठमाडौंका धारामा मेलम्चीको पानी
भारत–नेपालमा राजावादी र दलहरुबीच नयाँ समीकरण बनाउने प्रयासमा : एसडी मुनी
चामलको माडले पनि बनाउँछ अनुहार चम्किलो र मुलायम, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग
विद्यार्थीले परीक्षामा यस्तो जवाफ लेखेपछि जाँच्ने शिक्षक नै बेहोस (25398)
प्याजले यसरी बढाउन्छ घण्टौसम्म यौ’न आनन्द, कसरी प्रयोग गर्ने ? (15972)
कपाल काट्न नमानेको बालकले नाईलाई दिएको चेतवानीका शब्द सुन्दा दुनियाँ हैरान ! [भिडियोसहित] (12396)
आफुलाई इच्छा हुन्थेन तर उहाँ आइहाल्नु हुन्थ्यो…. (10371)
यी ७ कुरा भुलेर पनि भगवानसँग नमाग्नुहोस, नत्र अशुभ हुनेछ ! (9059)
अचम्मै तरिकले घट्यो सुनको मुल्य ,कति पुग्यो तोलाको ? (8807)
एकदमै पातलो दुब्लो साथै कमजोर महसुस गर्नुहुन्छ ? यो चिज खानुहोस् ५ दिनमै देख्नुहुनेछ यसको चमत्कार (8063)
हरेक पुरुषले एक पटक पढ्नै पर्ने ! (7149)
धन कमाएपछि अवश्य गर्नुहोस् यी ३ काम, नत्र हुन्छ धन नास (6879)